Ihowuliseyili High-Technical yokucoca umoya ihood yesibane 833 uMvelisi kunye noMboneleli | ARCAIR
Isomisi sezitya kunye neWasha yezitya
Iindlela zokungenisa umoya kuphela ngokuphinda zijikelezwe ezifuna ukufakela ngesihluzo sekhabhoni okanye isihluzo seplasma (engabandakanywa)
Uyilo olulodwa kunye nolunefashoni lwesibane lwehood lutsala amehlo akho xa uqala ukubona. Le hood yesibane ixhotyiswe ngamandla amakhulu e-DC motor kunye nefeni ye-centrifugal inika amandla anamandla okufunxa, ingxolo ephantsi, i-non-stick filter yegrisi, ukususa izixa ezikhulu zomsi kunye namavumba okupheka kwikhitshi ngokulula.
Ulawulo lokuchukumisa luhle, umoya wobutofotofo, uzisa imvakalelo yobuhle.
Izantya ezi-3 zokutsalwa ngokulula ezilungiselelwe iintlobo ezahlukeneyo zokupheka, gcina ikhitshi lakho litsha kwaye likhuselekile ukonwabela ixesha lokupheka losapho lwakho. Olunye ukhetho olukhethekileyo lwefucntion yale hood: Ulawulo olukude vumela ulawulo lwakho lokupheka lube lula lunokuyilawula nokuba kude kancinane. I-WiFi yenza ubomi bakho bokupheka bube nesamrt ngakumbi ukuba unokuvula ihood kunye nokukhanya ngefowuni yakho ngaphambi kokuba ufike ekhaya. Emva koko umoya unokuba ngcono xa ufika kwaye ukukhanya okufudumeleyo ekhitshini kukwamkele ekhaya.
Isihluzi esiphakamileyo sePlasma esingenamsebenzi wokucoca amalahle kuphela kodwa sinokususa iikhompawundi zekhabhoni zendalo ezincinci ezinjengeemolekyuli zevumba. Ukhuselwe ngokukhuselekileyo kwiintsholongwane, iintsholongwane, iintsholongwane kunye nokusasazeka kwazo.
Iimolekyuli, ezifana neentsholongwane kunye nevumba, ziyaqhekeka kwinqanaba le-molecular. I-electrode ye-plasma ivelisa izinto eziphuma kwi-oksijini, ezifana ne-ozone, ezifunekayo ukuphatha iimolekyuli.Ufumana umoya ococekileyo - i-oksijeni, umswakama kunye ne-CO2.
Iyahambelana nokusingqongileyo, iyasebenza kwaye inceda ukonga umbane: i-aerodynamics yangaphakathi iphuculwe ukuze ibenze bazole.
Ihood yesibane ijinga kwisilingi ngentambo yentsimbi ekwaziyo ukurhawuka (ubude obunokulungiswa ngokobude besilingi); Le hood yesibane isetyenziswa kuphela kwisitayile sokujikeleza kwakhona ekufuneka sibe nekhabhoni okanye isihluzo seplasma.
I-8W ye-LED pan enezantya ezibini ezimnyama, inokulungelelanisa ukukhanya okwahlukileyo njengoko ufuna, ikukhanyisela ngokufanelekileyo indawo yokusebenzela ngexesha lokupheka kwakho kwaye inokukhanya ebumnyameni ngoyilo lwayo oluhle.
Isibane sisebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu kwaye zenziwe ngoyilo olulungelelanisiweyo, lunokusetyenziswa njengesibane sesilingi.
Ngaphambili: Isiphelo esiphezulu se-T-Shape ye-LED egcweleyo yePaneli yeSiqithi ihood 810
Ihood yokupheka yobhedu
Isihluzo seAluminiyam yeHood yeHood yokupheka
Isihluzo seBaffle yeHood yokupheka
Isihluzo seKhabhoni yeHood yokupheka
Isihluzo seGrisi yeHood yokupheka
I-Cream Cooker Hood
Umbhobho weCook Hood
IHood yokuPheka engenaMgqomo
Ihood yokupheka yeglasi
IHood yeRange yanamhlanje
Iplagi kwi-Cooker Hood
Ihood yokupheka emhlophe
Ukuhamba komoya: 750 m³/h
Uhlobo lweMoto: 1x210W
Uhlobo lolawulo: Ulawulo lokuTonga/ulawulo lweWifi
Ukukhanyisa: ibhodi ye-ring ye-1xLED
Uhlobo lwesihluzi: Isihluzi se-1pcs
Ilayisha iQTY(20/40/40HQ): 192/400/400
Umbala: Mnyama / Mhlophe / Buhlaza / Buhlaza / Igolide / Purple
Imoto: DC 650m3/h
Umsebenzi wokucoca: Isihluzo se-HEPA
Yilwa iHood Cooker 820 yeSiqithi